Ihowuliseyili umhlathi isityumzi izincedisi oomatshini kwemigodi kunye nezixhobo izincedisi abavelisi ixabiso ngqo lehoseyile yoMvelisi kunye noMthengisi | Shengde
Umhlathi isityumzi izincedisi kwemigodi oomatshini kunye nezixhobo izincedisi abavelisi ixabiso ngqo lehoseyile
Udidi: izixhobo zomhlathi isityumzi
Inkcazo yexabiso: ixabiso ngexabiso kunye nenkqubo
Izinto eziphambiliipleyiti yomhlathi
Iinkqubo eziphambili: I-sodium silicate yokuphosa isanti kunye nokulahla i-foam
Izinto ezifanelekileyo: Ingqalutye yomlambo, igranite, ibasalt, isinyithi, ilitye lekalika, i-quartz, i-diabase, isinyithi, isinyithi segolide, umgodi wobhedu, njl.
Ukupakisha kunye nokuhamba: ukuthuthwa kweemoto, ukuthuthwa kolwandle kunye nokupakishwa kwesakhelo somthi
Phawula: Zonke izincedisi zingenziwa ngokwezifiso ngokwemizobo kunye neesampuli, kunye neeparameter ezithile kunye neemfuno kunokubonwa ngazo ngokubiza.
Izincedisi Emhlathini isityumzi nazo kubizwa ngokuba ngamalungu abuthathaka umhlathi isityumzi, nto leyo ibalulekileyo yinxalenye yomhlathi isityumzi; Kufuneka itshintshwe kumjikelo othile.
It lungohlulwa lube umhlathi isityumzi icala unogada ipleyiti, umhlathi isityumzi izinyo ipleyiti, umhlathi isityumzi ingqiniba ingqiniba, ibhanti elingunxantathu, njl
Icala labalindi bomhlathi isityumzi ibekwe phakathi ipleyiti izinyo esisigxina kunye nembasa izinyo eshukumayo. It is a ezikumgangatho ophezulu eyahlulayo manganese ngentsimbi. Ikhusela ikakhulu isakhelo sodonga lomhlathi kumzimba wonke.
Ipleyiti enamazinyo, ipleyiti yomhlathi ehambisekayo kunye nomhlathi osisigxina womhlaza wesityu yimigangatho ephezulu yokuphosa intsimbi yemanganese. Ukwandisa ubomi bayo benkonzo, ukumila kwayo kuyilelwe ukuba kulingane kwaye kuye ezantsi, oko kukuthi, kunokusetyenziswa emva kokuba isiphelo esinye sinxityiwe. Isitya esinamazinyo eshukumayo kunye nesipleyiti esinamazinyo esisigxina lelona lizwe liphambili lisetyenziswayo xa kuphulwe ilitye. Isitya esinamazinyo esishukumayo sifakwe emhlathini oshukumayo ukukhusela umhlathi ohambayo.
Ipleyiti yengqiniba yintsimbi ebaliweyo ngokuchanekileyo. Ayisiyiyo kuphela into yokuhambisa amandla, kodwa nenxalenye yokhuseleko isityumzi. Xa isityumzi iwela kwizinto ezingenakwaphulwa kwaye umatshini ugqitha umthwalo oqhelekileyo, ipleyiti yengqiniba iya kwaphulwa kwangoko kwaye isityumzi siyayeka ukusebenza, ukuthintela ukonakala kumatshini wonke. Ipleyiti yengqiniba kunye nephedi yengqiniba zikunxibelelwano oluqengqelekayo. Ngaphantsi kokusetyenziswa kwesiqhelo, akukho kungqubana okuncinci. Faka nje umaleko wegrisi kumhlaba wonxibelelwano. Lonke eli candelo sisixhobo sokuhlengahlengisa ubungakanani bezibuko lokukhupha kunye nokubuyekeza ukunxiba phakathi kweplate yomhlathi, ipleyiti yengqiniba kunye nephedi yeengqiniba.
Egqithileyo Impembelelo isityumzi izincedisi
Okulandelayo: Isanti dredger chain ipleyiti isityumzi izincedisi nqanawa isityumzi